MSGySV Panama sy ny Diaben'ny Amerikanina Latina - Ny Diabe Manerantany
Home » About us » Fifandraisana ofisialy » MSGySV Panama sy ny diaben'ny Amerikanina Latina
18 / 10 / 2021 15 / 10 / 2021 ny Antonio Gancedo
Izao tontolo izao tsy misy ady sy herisetra dia nandefa ity fanambarana ity tamin'ny martsa amerikanina latina
World without War and Herence Panama dia mamindra ity fanambarana mizara ireo hetsika natao tao amin'ny Diaben'ny Amerikanina Latina voalohany ho an'ny tsy herisetra sy ny fankasitrahany ireo mpandray anjara sy ireo mpiara-miasa:
Izao tontolo izao tsy misy ady sy tsy misy herisetra, dia nandefa fanasana manokana ho an'ireo fikambanana, fikambanana ary haino aman-jery isan-karazany, noho ny fanarahan-dry zareo ireo hetsika izay karakarainay ao anatin'ny rafitry ny Diaben'ny Amerikanina Latina tsy misy herisetra, izay natao niaraka tamin'ny tanànan'ny fahalalana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Clayton, tanànan'ny Panama, fahatsiarovana toy izany koa, ny andro fandriam-pahalemana iraisampirenena amin'ny 21 septambra ary andro tsy iharan'ny herisetra amin'ny 02 oktobra 2021.
Ireo tanora panameana dia nandray anjara tamin'ny hetsika nataon'ny World tsy nisy ady ary tsy nisy herisetra tao Panama, nankalazana ny diaben'ny Amerikanina Latina, noho ny fanohanan'ny Tanànan'ny fahalalana sy Soka Gakkai avy any Panama, izay nilaza hoe eny amin'ny fandriampahalemana sy ny tsy herisetra eto amin'ny firenentsika.
Ny fitazonana ny fepetra biosafety, tamin'ny talata 21 septambra teo, dia notanterahina ny hetsika voalohany, sarin'olombelona tandindon'ny fandriampahalemana, miaraka amin'ny fangatahana lavitra ataon'ny manampahefana Panameana, miaraka amin'ny solontenan'ny tanora Soka Gakkai ary mpianatra ny Akademia roa fiteny ho an'ny ho avy, izay voafantina amin'ireo tanora miavaka indrindra amin'ny faritra samihafa ao amin'ny firenena ny tanora, noho ny fahaizany manampahaizana.
Tamin'ny zoma mamirapiratra 01 Oktobra, maraina be, dia an-tongotra mangina no natao tao amin'ny valan-javaboary City of Knowledge, mahatadidy ireo maty niharan'ny herisetra isan-karazany, ary koa ny COVID-19, any Panama sy ny sisa eran'izao tontolo izao. Eo am-pandehanana dia manana ny fanampian'ny tanora mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny Vokovoko Mena Panama, mpianatra sy mpampianatra ny Isaac Rabin College ary ny tanora avy amin'ny fikambanana Bodista tsy mitady tombontsoa, Soka Gakkai avy any Panama.
Mpihira Grettel garibaldi, nanao ny fandraisam-peo fampielezana fampielezam-peo tamin'ny radio sy audiovisual izay nalefa tany amin'ireo gara lehibe sy fahitalavitra Panama City, toa izany ihany koa, nanome ilay lohahevitra mozika ilay tanora mpihira: "Mitady Fihavanana", miaraka amin'ireo mpihira. Margarita Henríquez, Yamilka Pitre ary Brenda Lao, izay notendrena ho hiram-pirenenan'ny Diaben'ny Amerikanina Latina any Panama, dia nanao ny fanontana audiovisual an'ny lohahevitra izahay, naneho izany tamin'ny sary marobe tamin'ireo hetsika natao tany amin'ireo firenena amerikanina latina tao amin'ilay faritra nandritra ny diabe sy ny sasany amin'ireo sidina nataon'i Mundo tsy nisy ady tany Panama, mba hampiroboroboana ny diaben'ny Amerikanina Latina; Zava-dehibe ny manamarika fa ny sary famantarana izay nampiasaina tamin'ny firenena rehetra ho an'ny fampitaovana ny diabe dia nataon'i Mundo sin guerras Panamá.
Mba hampiroboroboana ireo hetsika any Panama dia nisy ny dinika mivantana natao Belquis de Gracia, avy amin'ny World without war Panama, amin'ny fampahalalam-baovao manaraka: ny asabotsy 18 septambra amin'ny 8:00 maraina, tao amin'ny fandaharana amin'ny radio, "Eo amoron'ny fahamarinana", tarihin'ny mpanao gazety Aquilino Ortega; Ny talata 21 septambra tamin'ny 14 ora tolakandro dia nandray anjara tamin'ny fandaharana amin'ny radio "Spectacular Evening" karakarain'ny mpanao gazety izy ireo Didia GallardoIreo fandaharana roa ireo dia ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny fandaharana amin'ny onjam-peo RPC, izay misy fandrakofana nasionaly. Nisy dinidinika iray natao tamin'ny fandaharana ihany koaKolontsaina 247 isika», Fandefasana indray mandeha miaraka amin'ny fahitalavitra na amin'ny gara Plus, notarihin'ny Christian Communicator Kristian AlveloNy alarobia 29 septambra tamin'ny 21 ora sy sasany alina dia nalefa mivantana niaraka tamin'ny alàlan'ny Facebook Plus ihany koa ny tafatafa.
Grettel garibaldi nohadihadiana ihany koa tao amin'ny sehatry ny kolontsaina izay hita amin'ny vaovao Stellar of Sertv, fantsona 11, notarihin'i Lorraine NoriegaMikasika ny lohahevitra mozika "Mitady fihavanana", noforonin'ilay mpihira ary notanterahinay, dia natokana ho hiram-pirenen'ilay Diaben'ny Amerikanina Latina tany Panama izy io.
Ny tanànan'ny fahalalana sy ny oniversite Isaac Rabin, nanao fanontana tamin'ny tambajotra sosialy, nampifangaro ny hafatr'izy ireo tamin'ny an'ny Tontolo tsy misy ady ary tsy misy herisetra i Panama amin'ny tambajotra sosialy, momba ny hetsika fahatsiarovana hatramin'ny andron'ny fandriam-pahalemana sy ny andron'ny tsy herisetra.
Ireo hetsika roa notontosaina tao amin'ny tanànan'ny fahalalana, Panama, dia norakofan'ny mpandraharaha drone, Andriamatoa Eric Sánchez, izay nanome ny firaketana ny sary an'habakabaka tamin'ireo hetsika, tamin'ny fampiasana ny fitaovany sy ny fotoana anaovany azy manokana. Ry mpikamban'izao tontolo izao tsy misy ady ary tsy misy herisetra, faly izahay amin'ny fandraisan'anjaran'ny tanora panameana amin'ireo hetsika natao tao an-tanànan'ny fahalalana, faly izahay mahafantatra fa ny olon-dehibe ho avy dia mirindra amin'ny fandriam-pahalemana sy tsy herisetra eto amin'ny firenentsika.
soratra: Belquis de Gracia, Tontolo tsy misy ady ary tsy misy Herisetra Panama.